Servimatango C.A. is a inkampani esizinikezele ekusizeni abantu kanye namabhizinisi ukudala nokuthuthukisa amabhizinisi abo online.
Singabantu inkampani behileleke nakwezamabhizinisi ngokusebenzisa internet nendlunkulu emzini Ibarra-Imbabura-Ecuador. Sigxile imisebenzi yayo ekuhlinzekeni kumaseva service eziqashisayo Kunikezelwa for VoIP, ibamba, domain kanye nezinye izixazululo digital for umsebenzisi usebenzisa Web.
Sima by izimbangi zethu international by zokuhlanganisa amasevisi nezici ezintsha nezimo futhi creative, kuhlangene service ubuwena, iqembu umsebenzi ezikhethekile, iqembu lethu omuhle kakhulu ababambisene, professional technical support and high service quality kumakhasimende ethu.
Sinikeza amakhasimende ethu ithuba ukudala nokuthuthukisa amabhizinisi yimpumelelo ukuthi neqhaza ekukhuleni komnotho ngokuhlinzekwa kwezinsizakalo Internet international izinga elilungile kwezobuchwepheshe, wasekela ochwepheshe enhle kunazo zonke emhlabeni.
Andise isithunzi futhi ukuqashelwa international nokuhlinzekwa okusezingeni izinsizakalo eziyikhwalithi, iyahola ingqalasizinda kanye ezivelele kakhulu enkonzweni futhi nokuqeqeshwa ithalente womuntu.
Esikhathini esithile esidlule esifundazweni Imbabura; bemibono emibili ezinkulu Franklin futhi Nelly wanquma ukuya for a umqondo enkulu: "Zibonakalise ukuthi Ibarra-Ecuador angenza izinto ezinkulu".
Futhi njalo waqala road yabo empumelelweni: kuqaliswe in 2008, service Rent / eziqashisayo ServerVoip.com Servers; esiza abantu kanye namabhizinisi ukudala futhi bathuthukise ibhizinesi Internet Telephony (VoIP) futhi esandleni nge Alosip.com, ukuhlinzekela imizuzu izingcingo phezu internet.
Ngenxa ukukhula okuqhubekayo lezi zinsizakalo, banquma ukwakha inkampani yakhe futhi babhaliswa ngokomthetho igama: Matango Services Company Limited “ServiMatango C.A”.
Imisebenzi waqala ngo 2012 ngenhloso yokunikeza izinkonzo amaningi abantu ziqu kanye nezinhlangano ukuze bakwazi ukwakha nokuthuthukisa internet okwabo kuphi emhlabeni. Kuyaphawuleka ukuthi, baqasha amaseva nge platform VoipSwitch ukuze lelisu inkonzo ukubizwa Inthanethi, It kuwumgogodla inkampani.
I, Franklin Ukhukhamba:
“Ngifuna ukukhombisa Bakwethu yami, ukuba baphumelele ekuphileni akudingeki yathuthela kwamanye amazwe. Lapha e-Ecuador noma ezweni ahlala kulo nge drive, Ucwaningo, Ukuzimisela nomdlandla; nalabo isifiso esifanayo ukuthi uthola uma wena ngaphandle kwakho ongayifinyelela izinto ezinkulu”.
S Welcome to ServiMatango.com: Meet Ithimba lethu
Singabantu iqembu ochwepheshe bagogoda futhi ezikhethekile ezindaweni ezahlukene: Ubuchwepheshe, software, ukuthuthukiswa, marketing, e-marketing, design, technical support and kwamakhasimende ngolwazi oludingekile ukuhlangana izicelo service.
Nikeza izeluleko olunzulu, yiyona value added eyenza amaklayenti ethu qhubeka ukukhetha kwethu.
Sawubona I am Franklin Matango, I wabambisana in ServiMatango futhi ngazinikezela ekusizeni abantu kanye namabhizinisi ukudala nokuthuthukisa amabhizinisi online.
“I zinikeza izeluleko olunzulu ngabanye kanye nezinkampani ekwakheni nokuthuthukisa amabhizinisi internet”.
Hi Ngikhathazekile Nelly Matango, I wabambisana in ServiMatango futhi ngazinikezela ekusizeni abantu kanye namabhizinisi ukudala nokuthuthukisa amabhizinisi online.
“I ukuphatha mina ukulawula izidingo ekusebenzeni kahle kwebhizinisi internet”.
Hi Ngikhathazekile Andrea Maldonado, I wabambisana in ServiMatango futhi ngazinikezela ekusizeni abantu kanye namabhizinisi ukudala nokuthuthukisa amabhizinisi online.
Hi Ngikhathazekile Fernando Molina, I wabambisana in ServiMatango futhi ngazinikezela ekusizeni abantu kanye namabhizinisi ukudala nokuthuthukisa amabhizinisi online.
“Kuncike Consultancy lobuchwepheshe onguchwepheshe ibhizinisi internet”.
Sawubona I am Jessenian Tequiz, I wabambisana in ServiMatango futhi ngazinikezela ekusizeni abantu kanye namabhizinisi ukudala nokuthuthukisa amabhizinisi online.
“Ukuthuthukisa imibono creative ibhizinisi online”.
Hi Ngikhathazekile Angel Cedeño, I wabambisana in ServiMatango futhi ngazinikezela ekusizeni abantu kanye namabhizinisi ukudala nokuthuthukisa amabhizinisi online.
“Development Software ukuze ukushintsha izinqubo zebhizinisi online”.
Services yethu: qhafaza Lapha
ser VoIP ของผู้ค้าปลีก
Copyright © 2015 Ibhulogi C.A ServiMatango.